Iyo cumbia, yechinyakare mutinhimira weColombia | Absolut Kufamba
Pasina kupokana rwiyo rwemimhanzi rwakanyanya kubatana Korombiya, kune yayo tsika uye vanhu vayo, ndiyo cumbia. Iko hakuna bato kana kupemberera munyika ino umo makwaya asinganzwika nekutamba kurira kweiyo Colombian cumbia. Chiratidzo chekuzivikanwa kwayo kwenyika.
Iyi mimhanzi ine mimhanzi ine mimhanzi uye mutambo wevanhu wakaberekerwa kumahombekombe eCaribbean, asi hazvina kutora nguva refu kuti ive inozivikanwa munyika yese. Mune ino posvo tiri kuzotaura newe nezve kwayakatangira, tsika dzayo uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvine chekuita necumbia yeColombia.
1 Kwakatangira iyo Colombian cumbia
2 Colombian cumbia: zviridzwa
3 Colombian cumbia: madhirezi echinyakare
4 Colombian cumbia: kutamba
Kwakatangira iyo Colombian cumbia
Kufanana nezvimwe zvakawanda zveunyanzvi uye zvetsika kutaura, cumbia mhedzisiro yekusanganisa. Kuti uratidze kwayakatangira unofanirwa kufamba uchienda kune zana ramakore gumi nemasere, kuAtlantic mhenderekedzo yazvino yava Colombia. Paive ipapo izvo zvetsika zvinhu zve tsika nhatu zvakasiyana zvakanyanya: iyo Native Americanla European (ruoko rwakabatana neSpanish) uye iyo africana, yakaunzwa nevaranda vakaunzwa munyika itsva.
Guta rega rega kana tsika tsika dzakapa chakasiyana chinhu. Nziyo idzi dzinogona kunge dzakavakirwa pamimhanzi yechiaboriginal, nepo madingindira uye mazwi enziyo aine midzi yeSpanish. Pakupedzisira, iro protagonism re mhirizhonga nekutamba kweAfrica Ivo vakapedzisa iyo yekubheka iyo yaizopedzisira yaendesa kuColombia cumbia.
Uye aya ndiwo mabudiro akaitwa ichi chiitiko chinonakidza chemusanganiswa wakapfuma uye wakasiyana.
Cumbia ndiyo yakajairwa mimhanzi mimhanzi muColombia
Zvisinei, iyo Etymological mavambo yezwi cumbia inoita kunge isiri pachena. Nyanzvi zhinji dzinodzivirira kuti zvinobva pashoko kana, zvinoreva kuti "bato" kana "kurira" mumitauro yakati wandei yeAfrica.
Izvo zvinopfuura kusahadzika chero kupi kubudirira kunoshamisa kwekugadzirwa, uko kubva pakuberekwa kwayo muColombia kwakapararira pamusoro pemakore kusvika dzimwe nyika zhinji muCentral neSouth America. Cumbia parizvino inoimbwa nekutamba munzvimbo dziri kure kure seMexico, Peru, El Salvador, Venezuela, Argentina kana Peru.
Colombian cumbia: zviridzwa
Zvekare mweya katatu (maAmerian, eEuropean uye eAfrica) eiyo cumbia inonyatsoratidzwa mune zviridzwa ayo anoshandiswa kududzira.
Basa rinotungamira pasina mubvunzo nderezviridzwa. Rwiyo rwe ngoma, Mupiro wetsika wemuAfrica, ndiwo musana wezvinyorwa zvese. Ivo vanogadza mutinhimira mukuru uye vanobatsirwa nezviridzwa zvemuno senge mapfunde nzimbe kana the mapaipi, isina mubvunzo Spanish mavambo.
Iyo caña de millo, chishandiso chakakosha cheColombian cumbia
MuCumbia kune matatu marudzi e ngoma chikuru:
El Happy Drum, iyo inotevera mutinhimira werwiyo.
El Kufonera Drum, yaimboiswa kuseri kumashure kwechimbo.
La Drum. Iyi ndiyo yega ngoma yemuCumbian iyo isina mavambo eAfrica. Inorohwa neruoko, pasina kushandisa zvidhoma, zvese paganda uye pabhokisi remuti.
Kune zvakare matatu marudzi e mapaipi:
Pombi yemurume, iyo inonzwika senge kumashure.
Mhezi yechikadzi, iyo inoperekedza rwiyo.
Pfupi bagpipe, inoshandiswa sechiridzwa chega uye ine mukurumbira mukuru muzvidimbu chete zvinoridzwa.
Iyo cañamillero mutambi anokosha mune yega yega Columbian cumbia boka. Ndiye anobata iyo Miro nzimbe, chiridzwa chemhepo chine chitarisiko chinoyeuchidza mutopota unoyambuka. Seizvo zita rayo rinoratidza, rakagadzirwa nemapira nzimbe, asi rinogona zvakare kugadzirwa nefupa kana kunyangwe bamboo. MaMaracas, akodhiyoni nezvimwe zviridzwa zvechipiri zvinopedzisa mufananidzo.
Colombian cumbia: madhirezi echinyakare
Cumbia haisi yemumhanzi showa, asiwo inoonekwa imwe. Uye mune ino mamiriro ndipo apo vatambi vanopindira nehembe yavo yechinyakare. Hembe dzinoshandiswa kuecumbia dzinoshandiswawo mune mamwe madhiragi eColombia.
Izvo zvakajairwa zvipfeko zveColombia cumbia
Mukadzi: iyo yekudyara inoraira kuti vatambi vapfeke yechinyakare jena jena ine yakafara siketi kana siketi. Izvi zvakashongedzwa nemaribhoni uye, kazhinji nguva dzose, ine bolero kuratidza mavara eiyo Colombian mureza (yero, tsvuku uye bhuruu). Vanopfekawo mabhurauzi nemaoko akapamhama asi izvo zvinosiya mapendekete akashama.
Iye murume: zvipfeko zvavo zviri nyore. Inoumbwa netirauzi chena nehembe uye, kuti zvipe kubatwa kweruvara, tsvuku tsvuku inozivikanwa se "muswe wejongwe." Chikamu chakakosha chemurume sutu ndeyechinyakare vueltiao ngowani.
Zvese zvese uye zvishongo zveiyi nguwo zvinoita basa rakakosha mukuitwa kwecumbia kutamba.
Colombian cumbia: kutamba
Kune akati wandei marudzi emadhanzi uye choreographies zvakabatana neColombia cumbia. Izvi zvinomiririra kunyanya imwe kutamba kwenyengano. Varume nevakadzi vanopinda mudariro kubva akatarisana angles. Vanobva vauya pamwe chete pakati nekutamba vachitenderedza kurira kwengoma. Muvhidhiyo iyi tine muenzaniso wakanaka wedhanzi iri:
Pakati pe maitiro emunharaunda kana akasiyana zvakakosha zveColombia cumbia zvinosanganisira zvinotevera:
Classic cumbia, kwete kuimbwa. Chaizvoizvo chiridzwa.
savannah cumbia, mune chishandiso chakanyanya kunzi shizha remoni chinoshandiswa. Inotambwa mumadhipatimendi eSucre, Córdoba neBolívar.
cumbia vallenata, mune iyo akodhiyoni (chimbo chinonyanya kuzivikanwa chevallenatos) chinotora chikamu. Mukati meiyi subgenre yeColombian cumbia pane zvakawanda zvakasiyana.
Cumbiamba. Inotambwa muchimiro chemavara akakwenenzverwa ekwaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Iyo cumbia, yechinyakare mutinhimira weColombia
Cumbia, kuve yakajairika kutamba kweColombia, inogona kutambwa neboka revakadzi vana kana homble inonyanya kukosha.
Nati Melcon akadaro
che que vuena pag muArgentina ivo vakatiisa kuti tizive nezve cumbia chii chakanaka pag
Pindura kuna nati melcon